Ubongo, imwe nzira kune macOS Kutarisa | Linux Vakapindwa muropa
Ubongo, imwe nzira kune macOS Kutarisa
Joaquin Garcia | | Free Software
Zvakawanda uye zveMahara Software kunyorera zvinotsvaga kupa zvakafanana mabasa seyekushandisa maficha. Nekudaro, isu tine maficha anoteerera kuzwi redu seMycroft, mamwe anotipa masevhisi egeolocation, akadai seGnome Mepu uye vamwe vakaita sePlank, vanotipa mukana wekuva nedoko pane chero desktop.
Iko kushanda kwatinoisa kwauri nhasi, Ubongo, ndeimwe yeaya mafomu achave ari mukuparadzira kwakawanda uye mumakomputa mazhinjisezvo ichizviti ndiyo yemahara imwe nzira yekutarisa.
Kutarisa chirongwa cheMacOS chinobatsira tsvaga uye unomhanya maapp kana rumwe ruzivo nekuda kwekubatana kwaro neWikipedia kana neIMDB, iyo Cinema iri paNet service.Cerebro inomutsa zvese izvi nekutenda zvakanyanya kune kumwe kubatana kuri kuripo kana mukana wekuisa mapulagini kuwedzera mashandiro ayo. Kuti tishandure Cerebro, isu tinongofanirwa kuita zvinotevera kusangana kwe Ctrl + Space makiyi uye kwete iro chete iro Brain paneri ichavhurika, asi isu tichakwanisa kutsvaga sekunge iri Google Chrome yekufambisa bar.
Cerebro inogona kuve yakagadzirirwa nekuda kwema plugins ayo ainotsigira
Cerebro inoenderana nemapulagi ayo anowedzera mashandiro awo asiwo izvo inokutendera iwe kuigadzirisa kuti uite mamwe mabasa kana tine ruzivo rwekugadzirisa.
Cerebro inowirirana nekuparadzirwa kunoenderana neDebian neUbuntu asiwo nezvayo izvo shandisa AppImage fomati. Kana kugovera kwedu kusiri chimwe cheizvi, tinogona kusarudza kuumbiridza kodhi yese uye kuiisa mumafomati atinoda. Kune izvi isu tichazoda kodhi uye mirairo yeiyo Cerebro's GitHub repository.
Cerebro haigone chete kuiswa pane Gnu / Linux kugovera asiwo Tinogona kuiisa paWindows uyezve paMacOS. Chinhu chinoshanda kune avo avo, pamusoro pekushandisa iyo penguin inoshanda sisitimu, vanoshandisawo mamwe masisitimu anoshanda.
Ini pachangu, ini handifarire Kutaridzika uye kunyorera seCerebro hakuzvishandisi asi zvichiri kunakidza kune vashandisi vazhinji, kunyangwe kugona kuzvibatanidza nemamwe manzwi ekushandisa ekushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Ubongo, imwe nzira kune macOS Kutarisa
Dzinza OS inofa, Arkas OS inotora